vnc [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/a/ab5bce56a7d9ea6055e65f31cbae8dc6.xhtml failed
Torohevitra , Fanamarihana
VNC (Virtual Network Compuyting) raha tsorina dia hahafahana mampiasa avy lavitra (remote control) milina anankiray. Otran’ny hoe mahita izay mitranga ary afaka mampiasa mihitsy ilay milina. Mampiasa protocole RFB ny VNC ho an’ireo izay te handalina misimisy kokoa.
Arak’izany dia misy ny serveur ilay ho tifirina , dia misy ny client ilay mitifitra. Azonao atao ohatra ny mitifitra milina Linux any Andravoahangy na dia Windows avy any Analakely aza no hampiasainao.
Matetika ny port 5900 no hiasany.
Matetika saika hahitana implementation ho azy daholo amin’ny plateforme rehetra toy ny Windows, Linux, SPARC, HP-UX, ...
RealVNC: Izy ity no azo lazaina ho rohy ofisialy ho an’ny VNC. Mandeha amin’ny Windows, Linux, SPARC, ...
UltraVNC: Misy transfert fichier mivantana avy hatrany. Mandeha amin’ny Windows ihany.
TightVNC : Mandeha amin’ny Windows/UNIX.
Ho an’ireo mampiasa Windows dia azo hasolo tsara ny PC AnyWhere izy. Ny tombony aminy dia noho izy maimaim-poana. Ny hitako somary tsininy kely amin’izy ity dia ny transmission en clair ny mot de passe ary io ihany koa ny protection aminy. Ny fanaoko aloha dia mampiasa ssh miaraka aminy fa tsy fantatro na efa misy vnc hafa efa crypte any ho any.
Izaho dia mampiasa ny RealVNC isan-andro ary hitako tsara mihintsy ilay izy. Zavatra roa noho hampiasaiko azy. Ary ny antony dia mandeha 24H/24H ny Internet ao antranoko ary misy site @ ilay izy. Manana anarana @ Internet dia tsy mila mandika ny adresse IP isan-maraina rehefa handeha hiasa. Rehefa any ampiasana aho dia miditra any an-tranoko @ RealVNC Client dia afaka mijery ny e-mail-ko sy mamaly azy raha maika ilay izy . Avy any ampiasana ihany dia mandefa hira @ WinAmp aho any antranoko dia ohatran’ny hoe misy olona ao nefa izaho any ampiasana.
Soloko matetika ny mot de passe hidirako @ RealVNC satria tsy fantatra ireo hacker sy ny robots satria raha tafiditra eo @ ordinatera izy dia hafaka manao izay zavatra rehetra tiany hatao.
Saika nampiditra vncserver tao amin’ny serveur dedié iray aho mba hahafahan’ny namana iray miasa amin’ny milina linux. Fa somary sarotra ihany ny manao installation. Misy afaka manampy ve?
— hery@serasera.org 2006/08/01 09:36
vnc.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43